Qabiilka Iyo Qabyaaladda By, Omer Suleiman Ali (Ex- G/le Sare) – Araweelo News Network (Archive)
Shaki ma laha in qabiilka aynu sheeganno haddii aynu Soomaali nahay uusan dhibaato mooyee wax khayr ah lahayn loona baahan yahay in laga koro, sidaa oo ay tahay waxay culumadu ku doodaan in uu Alleh qabiil naga dhigay uuna xaq yahay. Qabiilka waa jiraa oo Quraanka ayaa noo sheegay hase yeeshee waa kee
qabiilka Alleh naga dhigay? Waxaan arkay culumo fara badan oo si adag ugu doodaysa in uu yahay midka aynu sheeganno. Waxaan doonayaa in culumadu in uu yahay midka aynu sheeganno ay wax daliil cad ah na siiyaan, waayo aayaddu waxay sheegaysaa in qabaa’il Alle naga kala dhiga, marka annaga ayay noo taal in aynu garanno qabiilkaasi kuu yahay.
Waxaan maalin dhoweyd akhriyey qormo uu qoray Sh. Axmed Cabdisamad oo uu ugu magac daray Qiimaha Qabiilka iyo Qurmuunka Qabyaaladda in kasta oo uu shiikhu ansixiyey in qabiilku yahay midka aynu sheeganno haddana wax wanaagsan ayuu qoray oo caddaynaya in uusan ahayn sida uu u sheegay shiikhu. Wuxuu shiikhu qoray in asxaabigii jaliilka ahaa ee la odhan jiray Salmaan Faarisi uu qabiilkiisu ahaa Faarisi, Suhaybna uu ahaa Rooman halkaas ayaad ka garan karaysaan in qabiilka Faaris iyo Roomanba ay u dhigmaan Soomaali ee aanay ahayn Hawiye iyo Daarood oo kale. Waxaa la moodaa in la isku qaldayo qabiilka iyo shacabka matal waxaa la odhan karaa shacabka Soomaaliyeed oo ka kooban saddex qabiil oo kala isir ah oo kala ah Soomaali, Jareer iyo reer Xamar, Baraawaan iwm oo isku qabiil ah. Sidaas oo kale shacabka Itoobiya wuxuu ka kooban yahay in 50 qabiil oo kala asal ah ka badan. Eritrea oo aan muddo soo joogay waxay ka kooban yihiin sagaal qabiil oo uusan midna mid la asal ahayn kuna kala duwan muuqaalka, luqadda, dhaqanka iyo caadada.
Muxuu yahay nasabku? Markii aan ka baadhay Lisaanul Carab nasab wuxuu noqday saddex wax, nasabku wuxuu noqon karaa qabiilka uu qofka ka tirsan yahay, meel magaceed sida reer waqooyi, reer koonfureed, reer bari iyo reer galbeed ama wuxuu noqon deegaan, wuxuu kale oo nasabku noqon karaa xirfadda uu qofku maalo sida Injineer, Dhaqtar, wastaad, nijaar iwm. Isnasab guursada waxaa loola jeedaa in uu ninku guursado gabadh ay isla qabsan karaan oo ama ay isku deegaan yihiin ama gabadh ka dhalatay qoys kula xirfad ah, sida haddii tahay dhaqtar waxay isugu kiin baxaysaa gabadh dhaqtarad ah ama uu aabeheed yahay dhaqta, haddii aad tahay qaalli waxaad gursataa gabadh ku soo barbaartay qoys qaalli ah iyo in aad guursato gabadh muslim ah haddii aad tahay muslim. Waxaa loo kala sharaf badan yahay sida loo kala Alle cabsi badan yahay ee ma aha sida loo kala tun weyn yahay. Nin aan soomin oo salaadin oo faajir ah ayaa dhahaya nin mu’min ah gabadhayda ma geyo waayo waa nasab dhiman. Ma garan karaa in uu ninkaasi wixii uu Alle xalaaleeyey uu xaaraantimeeyey uuna ku sugan yahay shirki oo uu mushrig yahay sidaasna ku if iyo aakhiraba seegi karo.
G/le Sare Omer Suleiman Ali 5/08/11
Published August 9, 2011 By info
Wasiirkii Hore Ee Duulista Hawada Cali Waran-cade Oo Ku Tilmaamay Furashada Ururada Siyaasada Khatar Kusoo Fooleh Somaliland, Isla Markaana Naqdiyay Socdaalka Augustine Mahinga Iyo Khilaafka UCID